Atụmatụ 14 maka ịba ụba ego na saịtị Ecommerce gị | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 16, 2014 Monday, September 15, 2014 Douglas Karr
N'ụtụtụ a, anyị kesara atụmatụ 7 maka ịba ụba mmefu ndị ahịa na ebe mgbere gị. E nwere usoro ị kwesịrị ị na-ebugharị na saịtị ecommerce gị! Dan Wang akọrọ otu edemede banyere omume ị nwere ike ime dịkwuo ọnụ ahịa nke onye na-azụ ahịa gị na Shopify na ReferralCandy egosiwo omume ndị ahụ na infographic a.
Mee ka imepụta ụlọ ahịa gị ka mma site na ịnakọta nzaghachi na ule mgbanwe mgbanwe.
Mee Onyinye Wepu iji mee ka ndị ọbịa kwenye ịgbanwe tupu ha apụ.
Jiri Email Jiri Obi Ike iji mee ka okporo ụzọ gaa na ụlọ ahịa gị ma mepụta ahịa ka mma karịa mgbasa ozi mmekọrịta.
Nọgide Na-akpọtụrụ Mgbe site na izipu akwụkwọ ozi oge niile na azụmaahịa na ego.
Ebuli Ad-Mmefu site na ule na iche iche Keywords ka mma kwụsị gị mkpọsa.
Leverage Nkwado Social site na ịrịọ arịrịọ na idozi nnukwu nyocha na ọkwa na ngwaahịa gị.
Tụọ anya n’ọrịre Ọdịnihu site na itinye ihe dị ka ngwugwu iji tụọ mmasị.
Na-ere Ngwaahịa site n’igosi ngwaahịa ndi metutara nke di na ahia ahia di otua.
Belata nkwụsịtụ ụgbọ site na iji mmemme mgbake ozi-e na ịkpọsa maka ndị ọbịa ịlaghachi n'ụgbọala ha.
Ihe ncheta echiche bụ email nudges ndị na-eme ka mmadụ zụọ ahịa. Tinye ahia ma ọ bụ ree ihe ọmụma iji nwekwuo mmasị.
Gụnye mpaghara onyinye nwere ngwaahịa pụrụ iche. Ha na - abawanye oke uru!
Mwepụta Storelọ Ahịa Facebook iji ree ndị ọrụ Facebook ozugbo ma nweta mgbasawanye site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Soro Instagram site n'ịgba asọmpi, igosi n'azụ ọrụ, na ịkekọrịta foto nke ndị ahịa na ngwaahịa gị.
Na-akwalite Okwu-Ọnụ site na ịchọta na ịkwụghachi ụgwọ ọrụ ndị nwere ike iru ndị na-ege gị ntị.
Na-adịbeghị anya na ozi ọma nke Apple Ṅaa, M ga-agbakwunye mgbakwunye nke usoro nke na-enye ohere maka nchọgharị dị mfe, ịzụ ahịa na ịzụta site na ekwentị nwere ike ịbụ otu n'ime usoro kachasị mkpa taa maka ịkwanyekwu ahịa!
Tags: ad-mmefuagbahapụ agbahapụnjikarịcha ntụgharịahịa na-emefuna wangecommerceimewe ecommerceemail ecommerceechiche ecommercenjikarịcha ecommerceọpụpụ enyeFacebookọdịnihu ahịaonyinyeinye onyinyemụbaa ịzụ ahịadịkwuo ịzụ ahịa ịzụ ahịammụba emefuinstagramisiokwu nhọrọonline nọrọỌdịghị na ngwaahịabelata agbahapụ agbahapụbelata ịgbahapụ ụgbọ ibu azụmahịaụlọ ahịaụgbọ ibu azụmahịankwado mmadụụlọ ahịa imeweWishlistokwu onu